शिल्पाको पुर्वपति बिकाश बिसीसंग कसरि डिभोर्स भो ? पहिलो गड फादरले खुलाए सबै कुरा (हेर्नुस भिडियो) – ताजा समाचार
शिल्पाको पुर्वपति बिकाश बिसीसंग कसरि डिभोर्स भो ? पहिलो गड फादरले खुलाए सबै कुरा (हेर्नुस भिडियो)
पछिल्लो समय मिडियामा चर्चामा रहेको बिषय र बिबादमा रहेको बिषय हो शिल्पा र छाबिकाण्ड यही सिल्पा र छविको बिषयले मिडियामा ततिरहदा यसको बास्तबिकता बाहिर आएको छ। शिल्पाले पहिलो बिबाह चलचित्र क्षेत्रकै सम्पादक बिकाश बिसी संग गरेको कुरा निर्देशक रोशन कुमार श्रेष्ठले खुलाएको छ।
रोशन कुमारका अनुसार शिल्पालाई पहिलो पटक चलचित्र क्षेत्रमा ल्याउने नै आफु भएको बताएका छन् । आफुले शिल्पा संग धेरै काम गरेको र उनलाई यहाँ सम्म पुर्याउन आफ्नो हात रहेको बताए । शिल्पाले बिकाश बिसी संग डिभोर्स गरेको कुरा आफुलाई पहिलो पटक भनेको उनको दाबी छ । उनिसंग गरेको यो कुराकानी तलको भिडियोमा हेर्नु होला ।
यो पनि पढ्नुस : काठमाडौँ- निर्माता छवि ओझा र अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलबीचको विवाद उत्कर्षमा छ । लामो समय प्रेम गरेर यो जोडीले तीन वर्ष अघि गोप्य रुपमा बिहे गरेका थिए । अहिले भने उनीहरु झगडा छताछुल्ल पोखिएको छ । सबै कुरा मिडियामा आएको छ ।अहिले शिल्पाले सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गरेकी छिन् ।
यसै बिचमा एक अन्र्तवार्तामा नायिका शिल्पाले आफुलाई फिल्म कर्मीले साथ नदिएको बताएकी छन् । उनले छन् कोही पनि कसैको पक्षमा नबोलेको बताएकी छन् ।
उनले आफुलाई कसैले साथ नदिए पनि मलाई साथ दिएनन् भनेर चुप लागेर भने नबस्ने बताएकी छन् ।अहिलेसम्मका घटनाले आफ्नो करिअर मात्र नभएर जीबननै ड्यामेज भएको बताएकी छन् ।
शिल्पा पोखरेल भन्छिन् ‘मैले छवीलाई लात्तीले घचेटेर नहिँडेको भए सायद शिल्पाले यो संसार छाडिन् भन्ने समाचार आउथ्यो’
काठमाडौँ- निर्माता छवि ओझा र अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलबीचको विवाद उत्कर्षमा छ । लामो समय प्रेम गरेर यो जोडीले तीन वर्ष अघि गोप्य रुपमा बिहे गरेका थिए । अहिले भने उनीहरु झगडा छताछुल्ल पोखिएको छ ।
सबै कुरा मिडियामा आएको छ ।अहिले शिल्पाले सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गरेकी छिन् ।यसै बिचमा एक अन्र्तवार्तामा नायिका शिल्पाले आफुलाई फिल्म कर्मीले साथ नदिएको बताएकी छन् । उनले छन् कोही पनि कसैको पक्षमा नबोलेको बताएकी छन् ।
तपाईंमाथि सम्पत्तिको लोभले छुट्टिन खोज्नुभएको छ भन्ने आरोप लागेका छे नी भन्ने प्रश्नमा उनले आफुलाई सबैले यस्तो आरोप लगाएको तर त्यो सबै झुट भएको बताएकी छन् । उनले अगाडी आरोप लाउनेलाई भनिन् सायद उहाँहरूलाई थाहा थिएन कि अग्नि साक्षी रोखेर बिहे गरेको मितिबाटै म उहाँकी पत्नी भइसकेकी थिएँ।
उहाँलाई मैले त्यही दिन लात्तीले घचेटेर नहिँडेको भए अहिले बोलिरहेको पनि हुन्नथेँ होला। सायद ‘शिल्पाले आत्महत्या गरिन्’ भनेर समाचार आउँथ्यो होला।
बिहे दर्ता भए पनि नभए पनि परम्परागत बिहे त गरेको हो नि । त्यही मितिलाई कानुनले मान्यता दिन्छ। तर, जहाँ माया छैन, त्यहाँ सम्पत्तिले केही गर्दैन । उहाँलाई मैले त्यही दिन लात्तीले घचेटेर नहिँडेको भए अहिले बोलिरहेको पनि हुन्नथेँ होला। सायद ‘शिल्पाले आत्महत्या गरिन्’ भनेर समाचार आउँथ्यो होला। उनले कसैले मेरो पिडा बुझ्न भन्दा पनि सबै मेरो कान फुटेको छ कि छैन भन्नेतिर गएको बताएकी छन् ।
एक वर्ष अगाडी रमाइलो छ युट्युव च्यानलाई दिएको अन्तर्वार्ता पनि हेर्नुहोस्
उनले आफुलाई कसैले साथ नदिए पनि मलाई साथ दिएनन् भनेर चुप लागेर भने नबस्ने बताएकी छन् ।अहिलेसम्मका घटनाले आफ्नो करिअर मात्र नभएर जीबननै ड्यामेज भएको बताएकी छन् । शिल्पाले डिर्भाेषको फाइल पनि दर्ता गराइसकेकी छन् ।